समाचार Archives - Page 186 of 187 - RastraKhabar-Nepal's No. 1 Digital Newspaper
समाचार (Page 186)
लिओनल मेसी वैवाहिक बन्धनमा
July 4, 2017 rastrakhabar No Comment
नेकपा एमालेले २० वर्षपछि दाङको मुख्य शहर घोराहीमा फेरि आफ्नो पुनरागमन गरेको छ। २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा घोराही, तुलसीपुर र लमही लगायतका क्षेत्रमा एमालेले जिते पनि त्यसयता उसले जित्न सकेको थिएन।
माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडको बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) निर्वाह गर्ने यहिआषाढ ७ गते सारदा नगरपालिका ५ स्थित माल्नेटा, सल्यानमा बृहत निःश’ल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ ।
आइसीसी यू-१९ विश्वकप क्रिकेट छनोटको तयारीका लागि भारतमा रहेको नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले बल्ल आज पहिलो अभ्यास खेल खेल्ने मौका पाएको छ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज चीन प्रस्थान गरेका छन्। चीनले आयोजना गरेको ‘२३औँ चीन–लान्जाउ लगानी तथा व्यापार मेला’मा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति पुन चीन प्रस्थान गरेका हुन्।
गिरप्तार गरिएका आफ्ना कार्यकर्ता अझै रिहा नगरेको जनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रोल्पामा अनिश्चितकालीन यातायात बन्द आह्वान गरेको छ।
सम्मरीमाई गाउँपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिकको जित
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिकले जितेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्रनाथ शुक्लाले ३०६६ मतसहित विजय हासिल गरेका हुन् ।
केबल तथा फोनका तारहरु ३ महिनाभित्र अन्डरग्राउण्ड !
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सरकारलाई उपत्यकामा अव्यवस्थित रुपमा रहेका केबल तथा फोनका तारहरु ३ महिनाभित्र अन्डरग्राउण्ड गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उपत्यकामा रहेका फोन तथा केबलका तारहरु अव्यवस्थित रुपमा टांगिएका कारण शहर कुरुप बन्दै गएको छ । बाटो बिस्तार भएका कैयन स्थानमा टेलिफोन तथा केबलका तारहरु सडकमा छरपस्ट छन् । साथै बिद्युत प्राधिकरणले […]